I-Raw Synephrine HCL Powder (5985-28-4) Abakhiqizi - Phcoker
I-Synephrine HCL powder iyinhlanganisela yamakhemikhali ye-alkaloid eyenzeka ngokwemvelo etholwe izitshalo futhi ikhishwe ukuze isetshenziswe njengesengezo…
Ividiyo yama-Raw Synephrine HCL (5985-28-4)
Imininingwane yama-Raw Synephrine HCL (5985-28-4)
Igama Product I-Raw Synephrine HCL powder
Igama leKhemikhali I-Synephrine hydrochloride; 5985-28-4; 4- (1-Hydroxy-2- (methylamino) ethyl) phenol, i-hydrochloride;
Brand NAme I-Yocon
I-Drug Class Amafutha alahlekile
CAS Inombolo 5985-28-4
I-molecular Fi-ormula C9H14ClNO2
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-203.666 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-203.071 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-147-150 ° C
Indawo yokubilisa 341.10 ° C. @ 760.00 mm Hg (est)
I-Half Half-Life Ayikho idethi etholakalayo
Color Mhlophe uphawuda omhlophe
Sukufaneleka Ayikho idethi etholakalayo
Aukuphikisana Ngokusobala izithako ezishisayo kakhulu ezishisayo zamafutha
I-Raw Synephrine i-hcl i-powder (5985-28-4) Incazelo
I-Raw Synephrine HCL i-powder iyinhlangano yamakhemikhali e-alkaloid eyenzeka ngokwemvelo itholakala izitshalo futhi ikhishwe ukuze isetshenziswe njengesengezo. Ngezinye izikhathi i-Synephrine ibizwa ngokuthi 'i-orange ebabayo' njengoba itholakala kuma-oranges amancane. Eqinisweni, itholakale ngokwemvelo emgodini we-orange, yingakho ibiwa ngokuthi i-orange enomuncu. Inhlanhla ye-orange manje isetshenziselwa inombolo efana nezinkinga ezifanayo kanye nezinye izinkinga zanamuhla zithinta ukulahlekelwa isisindo futhi njengesizo empini ngokumelene nonyawo lomdlali. ingenye yezinhlanganisela eziyinhloko e-orange enomuncu futhi ecatshangwa ukuthi iyisisekelo semfanelo yokuphulukisa yesitshalo I-Raw Synephrine HCL powder, ngokusobala ukuthi amafutha afisa kakhulu ama-ingredients.Synephrine itholakala kuma-oranges, futhi uma unayo, ungakwazi bazuze kuzo zonke izindlela ezahlukene.
Njengesithako sokuncedisa ukudla, i-synephrine HCL powder cishe iphephile kubantu abadala kakhulu uma isetshenziswe kahle. Noma kunjalo, kunemiphumela emibi emnene phakathi kwabasebenzisi abathwala kakhulu i-synephrine hcl. I-Synephrine iyisisusa, ngakho-ke kubalulekile ukuqala esilinganisweni esincane ukuhlola ukubekezelelana. I-synephrine excessive ngokweqile ingabangela ukwanda okusheshayo kwegazi, ama-arrhythmiya enhliziyo, ukukhukhula kwesikhumba, ukuhlala, ukuphumula, ukukhathazeka, izinkinga zokuphefumula, isizungu, ikhanda, ukuthuthumela, ishukela ephansi yegazi kanye nokungalingani kweshukela egazini, ubuhlungu besisu, i-nausea, nesifo sohudo, ikakhulukazi kuhlanganiswe nezinye izikhuthazo.
I-Synephrine i-hcl powder (5985-28-4) Indlela Yokusebenza
Imiphumela ye-cardiavascular ligands ihlotshaniswa ne-adrenergic receptor ebophayo. Ngokuvamile, lapho i-ligands ibophezela ku-α-adrenergic receptors, i-vasoconstriction ivela, futhi uma ibophezela ku-receptors ye-β1-adrenergic, inkontileka ye-cardiovascular kanye nokwanda kwesilinganiso senhliziyo. Ucwaningo lubonisa ukuthi i-synephrine hcl powder ibophezela ku-β3-adrenergic receptors, okwenza kube nokwanda kwamandla omzimba wokuphula amafutha. Ukubopha ama-receptor β3-adrenergic akuthinti ithonya lenhliziyo noma umfutho wegazi. Futhi, ngoba i-synephrine ibonisa kancane noma ayikho imbopho e-α1-, i-α2-, β1-, ne-β2-adrenergic receptors futhi ayibonakali ukuthi ingabonakali ngendlela engavamile, imiphumela ye-cardiovascular, njengokwanda kwenani lenhliziyo nokucindezelwa kwegazi, akuzona okuhlangenwe nakho okujwayelekile okusetshenziselwa, ngokungafani nezinye izinhlobo ze-phenylethylamine nezidakamizwa ze-phenylpropanolamine. Izinguquko ezincane zesakhiwo ziholela ekuhlukeni okukhulu kwe-adrenergic receptor ebopha futhi kamuva ikhono lokukhiqiza imiphumela ye-cardiovascular.
I-Synephrine i-hcl powder iphinde ithuthukise ukusetshenziswa komzimba we-carbohydrate ngokukhiqiza amandla amaningi ngendlela ye-ATP.49-52 Insiza ukutholakala kwamaselula kweglucose kumaseli emisipha, kanye ne-glycogenolysis, i-gluconeogenesis, i-glycolysis, ne-oxygen uptake. Ukubandakanya kokubili i-calcium ion kanye ne -AMP nge-adrenergic receptors kuye kwaboniswa ukuthi kuhileleke kulezi zinqubo ze-biochemical, okubonisa ukuthi kuhileleke kwezindlela eziningi.
Ngaphandle kwalokho, ukusetshenziswa kwe-Synephrine hcl powder kuzovimbela ukusebenza kwe-NF-kB. Lesi sici siyisihluthulelo ekwenzeni izifo ezinokuvutha njenge-asthma. Ukusetshenziswa kwe-Synephrine powder kutholakale nokuthi kuthinta isenzo se-eotaxin-1 hormone ngokuyinhloko. Lokhu kuvimbela ukuhamba kwe-eosinophil endaweni evulekile.
Nakuba kungabonakaliswa kahle ngokuhlolwa, ukusetshenziswa kwe-Synephrine hcl powder kutholakale ukuvimbela isenzo se-acetylcholineterase. Lezi zimakhemikhali ziyaziwa ukuthi zibangela isifo se-Alzheimer.
Izinzuzo we-Synephrine i-hcl i-powder (i-5985-28-4)
I-Synephrine hcl yokulahlekelwa kwesisindo
I-Synephrine hcl ukusiza ukulahlekelwa ukudla
I-Synephrine hcl yandisa ukutholakala kwe-glucose emisipha engcono
I-Synephrine hcl i-glycogenesis yezinsiza ezingalungile
I-Synephrine hcl isiza ekulawuleni isifo sikashukela
I-Synephrine hcl ithuthukise ukugaya
I-Synephrine hcl inciphisa ukwesaba ngaphambi kokuhlinzwa
I-Synephrine hcl ithuthukisa ama-mood namazinga wamandla
Synephrine hcl ukusiza ukulawula amabhaktheriya ayingozi
I-Synephrine hcl kusiza ukuvuvukala okuncishisiwe
Kunconywe i-Synephrine i-hcl i-powder (5985-28-4) Isilinganiso
Umthamo osetshenziswa kakhulu weSynephrine hcl umayelana ne-100mg ngosuku. Lokhu kubhekwa njengomthamo owanele okwazi ukufeza ukulahleka kwesisindo. Kodwa-ke, inani elinconyiwe lokuthi nabasebenzisi abanesimo okufanele bangadluli kulo ngu-200mg ngosuku. Noma yini engaphezulu kwalolu phawu ibhekwa njengobuthi futhi izobeka lowo muntu engcupheni yokuthola isihlenga semiphumela emibi ebulalayo ehambisana nokusetshenziswa kwezikhuthazi. Kunconywa ukuthi uqale nge-10 kuya ku-20mg ukuqinisekisa ukuthi i-Synephrine hcl powder iyahambisana ngokukhululekile nomzimba wakho. Ngemuva kokuthatha lo msindo wokuqala, kufanele uthathe isikhathi ukuhlola impendulo yomzimba kokungeziwe. Uma konke kuhamba kahle, isilinganiso sesibili esingu-20mg singangezwa ngemuva kwamahora amabili. Ngaphandle, isikhathi sokuphepha esiphephe kakhulu sithatha i-Synephrine hcl powder kanye njalo emahoreni amabili.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo we-Synephrine i-hcl i-powder (i-5985-28-4)
Ukusetshenziswa kweSynephrine nakho kuhambisana nemiphumela emibi njenganoma yimuphi omunye umuthi. Lapho omunye enza izithandani ukusetshenziswa kwe-synephrine hcl ne-caffeine ndawonye. futhi iza neminye imiphumela emibi. Okulandelayo eminye yemiphumela emibi ejwayelekile:
Umfutho wegazi ophezulu.
Ukushaya kwenhliziyo okungavamile.
Ukufa uma kusetshenziselwa isilinganiso esiphezulu ngaphambi kokuhlinzwa.
Ama-hallucinations / kwengqondo
I-coronary spasms kanye ne-thrombosis
Ukuphazamiseka kwengqondo yenhliziyo (fibrillation ye-ventricular)
Ukunciphisa ubukhulu bomzimba (rhabdomyolysis)
Umonakalo wamagciwane ngenxa yocindezelo eyengeziwe emisipha (i-compartment syndrome)
Ubuhlungu besifuba (i-angina ehlukile)